လိင်မှုဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအတိုင်းအတာ၊ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာစာရင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာရောဂါစစ်ဆေးမှုစာရင်း - ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဘရာဇီးတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌နာကျင်မှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory နှင့် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory: ဘာသာပြန်စာပေ, လိုက်လျောညီထွေနှင့်ဘရာဇီးမှာအသုံးပြုမှုအဘို့အတည်ပြုခြင်း (2016)
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2016 Jan;45(1):207-17. doi: 10.1007/s10508-014-0356-5.
Scanavino Mde T က1,2, Ventuneac တစ်ဦးက3, Rendina HJ3,4, Abdo CH5, Tavares H ကို5, Amar ML6, Messina B ကို6, Reis SC6, Martins JP6, ဂေါ်ဒွန် MC6, ဗီအဲရာ JC6, Parsons JT3,4,7,8,9.
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိလိင်ဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ၊ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေး (SCS), ၂၂- ပုဒ်မ Compulsive Sex Behaviour Inventory (CSBI-22) နှင့်ဘရာဇီးတွင်အသုံးပြုရန် Hypersexual Disordering Inventory (HDSI) ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ စုစုပေါင်းပါဝင်သူ ၁၅၃ ယောက်သည်စိတ်ရောဂါစစ်ဆေးမှုကိုခံယူပြီးကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်မှပေါ်တူဂီမှတူရိယာများ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စဉ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့်ရလဒ်များသုတေသနအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။ HDSI စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုအကဲဖြတ်ပြီးတိုင်းတာမှုအားလုံး၏တည်ဆောက်မှုတရားဝင်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ SCS နှင့် HDSI အတွက်တိုင်းတာမှုတိုင်းအတွက်အချက်တစ်ချက်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်သည်။ CSBI-22 အတွက်အချက် (၂) ချက် (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှု) ကိုသာကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်ခဲ့သော်လည်းအချက်လေးချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ရမှတ်အားလုံးတွင်ကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှု (alpha> .153) ရှိခဲ့ပြီး၊ ယာယီတည်ငြိမ်မှုကိုပြသခဲ့သည် (> .22)၊ လူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရပြီး (အကြမ်းဖက်မှုမှအပ) လိင်စွဲလမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု (။ > .75) နှင့်ခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒိုမိန်း = .76) နှင့် Zuckerman Kuhlman ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ (.81 နှင့် .40 အကြား domain) ၏ဒိုမိန်းကိုရှာဖွေသည့် Impulse Sensation နှင့်အတူအလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှု။ HDSI ၏ sensitivity သည် ၇၁.၉၃% နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ၁၀၀% ရှိသည်။ အားလုံးတိုင်းတာအလွန်ကောင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများပြသခဲ့သည်။ SCS, HDSI နှင့် CSBI-43 ၏ထိန်းချုပ်မှုဒိုမိန်းတို့သည်မြင့်မားစွာဆက်နွယ်မှုများ (theoret> .55) အရ၎င်းတို့အားသီအိုရီအရဆင်တူသောတည်ဆောက်ပုံများကိုတိုင်းတာရန်ပုံရသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးအလွန်အမင်းတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းပြဿနာလက္ခဏာတွေတစ်စပျစ်သီးပြွတ်အဖြစ် hypersexuality ၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; HIV ပိုး; Hypersexual ရောဂါ; Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive